कुकरमा फ’स्यो बालिकाको टाउको, डाक्टरले पनि निकाल्न नसकेपछि…. « गोर्खाली खबर डटकम
कुकरमा फ’स्यो बालिकाको टाउको, डाक्टरले पनि निकाल्न नसकेपछि….
सो इलाकाकी एब बालिकाको टाउको कुकरमा फ’सेको हो । खाना पकाउने कुकरमा बालिकाको टाउको फ’सेपछि त्यसवाट निकाल्न चिकित्सकलाई पनि निकै मुस्किल भएको समाचार भारतीय मिडिया आजतकले पनि लेखेको छ । बच्चीको टाउको कुकरमा यसरी अडियोकी कुनै हालतमा पनि त्यसै निकाल्न सकिएन । ति बालिकालाई अस्पताल लगियो । अस्पतालमा बालिकालाई अक्सिजन समेत लगाएर राख्नुपर्यो । अनि कुकरलाई का टेर बालिकाको टाउको बाहिर निकालिएको छ ।
अस्पतालमा सुरुमा चिकित्सकले पनि कुकर निकाल्ने कोशिष गरे । तर चिकित्सक पनि सफल भएनन् । चिकित्सकले बालिकालाई इ’न्जे’क्सन लगाए र कुकर का ट्ने मानिसलाई बोलाए । भाडा बनाउने मानिस अस्पतालमा आएर कुकर का’टिदिएपछि मात्र बालिकाको टाउको निकाल्न सफल भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । त्यस क्रममा बालिकाको टाउकोमा सामान्य चोट पनि लागेको छ । बालिकाको टाउकोमा केही सुजन पनि आएका कारण अहिले ति बालिका चिकित्सकको निगरानीमा छन् ।
सन्दीपले आजदेखि सिपिएल खेल्दै